Corralejo — ihu igwe site na ọnwa, mmiri okpomọkụ
World Resorts N'ókèala Spain Corralejo
Corralejo — Castellón de la Plana Corralejo — Camp de Mar Corralejo — Calella Corralejo — Cala Mesquida Corralejo — Cadiz Corralejo — Costa Brava Corralejo — La Pineda Corralejo — Lanzarote Corralejo — Los Alkazares Corralejo — Magaluf
The nkezi kacha kwa ụbọchị okpomọkụ — 26.6°C August. Nkezi kacha n'abalị okpomọkụ — 22.7°C October. The nkezi kacha nta kwa ụbọchị okpomọkụ — 18.9°C February. The nkezi kacha nta n'abalị okpomọkụ — 16.9°C February.
Nkezi kacha okpomọkụ nke mmiri — 23.1°C ofu October. The nkezi kacha nta okpomọkụ nke mmiri — 18°C ofu March.
Oke ọdịda — 24.8 mm E dere ya October. Kacha nta ọdịda — 2.1 mm E dere ya July.